Daacish Archives - Sawirrotv
Diyaaradaha Maraykanka oo Duqayn ku Weeraray Hogaamiyihii Ururka Daacish ee Gobolka Bari (VIDEO)
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay duqayn saqdii dhexe ee habeenkii Khamiista ka dhacday Deegaanka Buqo oo qiyaastii 50km u jirta Degmada Qandala ee Gobolka Bari. Wararka ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay fuliyeen duqayn Daacishta Somaliya lagula beegsaday Gobolka Bari ee Puntland. Warsaxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in duqayntaasi …
Puntland oo Soo Bandhigtay Dagaalyahano ka soo Goostay Ururka Daacish (SAWIRRO)
Maamulka Puntland ayaa Magaalada Boosaaso waxa ay ku soo bandhigtay sideed nin oo sida la sheegay isu soo dhiibay Maamulka Puntland, ka dib markii ay ka soo goysteen Ururka Daacish. Raggan ayaa sida la shegegay ka mid ahaa maleeshiyada Ururka Daacish ee ka dagaalama Buuraha Cal Madow ee Gobolka Bari. Xubnahan lagu soo bandhigay Magaalada …
Daacishta Soomaaliya oo Soo Bandhigtay Sawirka iyo Magaca Ninkii Isku Qarxiyay Magaalada Boosaaso (VIDEO)
Ururka Daacish Qaybtooda Spoomaaliya ayaa soo bandhigtay magaca iyo Sawirka ninkii ka dambeeyay qaraxii Ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari. Weerarkan ayaa waxaa gaystay nin naftii hallige ahaa, iyadoo uu beegsaday bar kontorool oo Ciidamada Booliska Puntland ku leeyihiin agagaarka Xarunta Dowladda Hoose ee Magaalada Boosaaso. Daacishta Soomaaliya oo sheegatay …
Ciidamada Ciraaq oo soo Bandhigay Wiil 7-Sano Jir ah oo Jaakada Miinada loo soo Xiray (VIDEO)
March 24, 2017 – Ciidamada dalka Ciraaq ayaa soo bandhigay wiil Toddoba jir ah oo ay ka soo qabteen agagaarka magaalada Mosul, kaasi oo dagaalyahanada Daacish ay ku soo xireen waxyaabaha qarxa si uu isugu qarxiyo ciidamo ku sugnaa bar koontrool. Wiilkan yar ayaa dusha ka xirnaa Funaanada buluuga ah ee lagu yaqaano Kooxda Chelsea …
Ururka Daacish oo Nolosha ku gubay labo Askari oo u Dhashay Dalka Turkiga (SAWIRRO)
December 23, 2016 – Ururka Daacish ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay Sawirro iyo Muuqaalo video-ah oo ku aadan iyaga oo nolosha ku gubaya labo askari oo ay sheegeen inay kamid ahaayeen Ciidamada Dowlada Turkiga, kuwaa oo lagu qabtay dagaal ka dhacay gudaha dalka Siiriya. Muuqaalka ay baahisay kooxda Daacish ayaa waxaa ka soo muuqday …
Hogaamiyaha Ururka Daacish oo Ciidankiisa Ugu Baaqay Inay Difaacaan Magaalada Mosul (VIDEO)
November 03, 2016 – Hogaamiyaha ururka Daacish ayaa dagaalyahanadiisa u soo duubay cod maqal ah kaasi oo fariin uu ugu diray saraakiisha ka tirsan ururka Daacish ee ka dagaalamaya Magaalada Mosul. Codkan Maqalka ah oo ay Daacish soo bandhigeen, ayaa waxa ay ku sheegeen inuu yahay Hogaamiyaha Ururkooda Abuu Bakar Al-Baqdaadi, waxaana uu si adag uga …
October 27, 2016 – Wararka inaga soo gaaraya Degmeda Qabdala ee gobolka Bari ayaa sheegay in xalay ay Xoogagii Ururka Daacish ee maalintii shalay la wareegay gacan ku haynta Degmadaasi ay isla xalay saq dhexe isaga baxeen Degmadaasi. Ciidankaasi oo tiradoodu lagu qiyaasay illaa 50 dagaalyahan ayaa isaga baxay Degmada Qandala, kadib markii ay ka …